I-Airbnb® | Cuba - Ukuqasha Kokuvakasha & Izindawo Zokuhlala
Thola Izindawo Ongahlala kuzo e- I-Cuba ku-Airbnb
Okuqashwayo Ngamaholide e- I-Cuba
Izindawo zokuhlala e- I-Cuba
Le ndawo iyamangalisa futhi saphathwa ngendlela enhle. Ngifisa sengathi ngabe ngahlala izinsuku eziningi
Lezi zindawo ezimbili ku-Malecon 413 no-351 zinconyelwe kakhulu abesifazane abahle kakhulu bezivakashi kanye namanenekazi ngiyabonga ngokuhlala
Ikamelo · 6 imibhede
Okokuzithokozisa okunesilinganiso esiphezulu e-Cuba East
1491 okushiwo abanye
887 okushiwo abanye
Awusoze wazisola uma ukhetha iMalcon Beach, lapho uzothola khona umnikazi nabasebenzi abanomusa kakhulu.
I-Casa particular · 5 imibhede
Indawo enhle nenhle ebheke iMalecon. Isidlo sasekuseni esikhulu esinambithekayo esikhulu singihlelele usuku. Abasebenzi benyukele ngaphezulu nangaphezulu komsebenzi wabo ukusiza ukuthola umthwalo wami owalahleka ekuhambeni. Angikwazanga ukukufela ngaphandle kokuxhaswa kwabo. Ngincoma lokhu kubo bonke abahambi, ikakhulukazi abesifazane abahamba bodwa
314 mi ngokuqhela
321 mi ngokuqhela